GEEDKA DOOLARKA, NUUCYADA DARYEELKA GURIGA - DHIRTA GUDAHA
Maanta waxaan kuu sheegi doonaa qarsoodiga ah ee beerto iyo koritaanka a "dollar dollar".
Waxaad baran doontaa aasaaska daryeelka iyo taranka, iyo sidoo kale waxyaabo kooban oo xiiso leh oo ku saabsan dhirta.
Ma taqaanaa? Sanadkii 1908, agaasimaha beerta beerta ee Berlin, Adolph Engler, ayaa magaciisa casriga ah u siiyay warshad ku heshay sababtoo ah cufnaanta caleemaha cawska.
Talooyinka loogu talagalay daryeelka ee geed gole
Si aad u bilowdo, baro macluumaadka guud ee ku saabsan geedka dakhliga.
Zamioculcas - warshad ka tirsan qoyska reer Aroids wuxuuna ka yimid Afrika.
Geedka Doolarka wuxuu leeyahay caleemo iyo caleemo dhalaal ah oo qaro leh.
Hadda oo aan wax yar ka barannay Zamiokulkas, waxaan sii wadi karnaa talooyinka loogu talagalay daryeelka dhirta.
Shuruudaha aasaasiga ciidda
Si aad u ogaato nooca ciidda ee loo baahan yahay zamiokulkas, waxaad u baahan tahay inaad xasuusato nooca dhulkiisa uu ku badan yahay dhulkiisa, Afrika.
Ubaxa wuxuu u baahan yahay ciidda dabacsan, kaas oo "neefta" si fiican u gudbi doona oo u dhaafi doona qoyaan. Waxaad ka iibsan kartaa ciidda dukaanka ubaxa oo ku dari kartaa ciid webiga. Ama haddii kale samaynta dusha sare ee zamiokulkas adoo isku dardaraya carrada cawska ah, caleenta cagaarka ah (laga heley natiijada caleemaha caleemo dhacday), cagaar iyo ciid webiga.
Waxaad samayn kartaa "isku darka" kale ee "chernozem", "peat" iyo "sand" oo isku mid ah. Markaad isku dardarayso ciidda waxaad u baahan tahay inaad ku darto si aad u jilciso sphagnum, taas oo dabacsan ciidda.
Waa muhiim! Geeddi doollar ayaa doorbidaya ciid ah oo leh astaamin dhexdhexaad ah (pH 6).
Heerkulka heerkulka iyo iftiinka
Zamioculkas aan qabin xaaladaha xabsiga. Waxaa la gelin karaa labada koonfureed iyo daaqada waqooyi. Geedka A dollar ma cabsanayo qoraallada, xilli xilli diirran waxa ay ku fiican tahay balakoonka furan ama beerta.
Si kastaba ha noqotee, marka aad dooranaysid meel ubax ah, ka taxadar nalalka. Joogitaanka iftiinka ayaa saameynaya midabada midabka ee caleemaha, marka lagu daro, caleemaha cusub waxay u koraan daciifnimo iyo mid aan habboonayn dhalashada.
Geed dollar ah si degan u dulqaadan heerkulka hooseeya iyo heerkul aad u sarreeya. Heerkulka ugu fiicani waa 18-20 degrees. Xilliga jiilaalka, wuxuu dareensan yahay heerkul ah + 16-18 degrees.
Sidaa daraadeed, warshad Afrikaan ah ayaa lagu haysan karaa guri dabaq ah iyada oo aan abuurin jawi kuleyl ah. Dhirta uma baahna in ay kordhiso maalinta qoraxda adigoo rakibaya nalal dheeraad ah.
Waraabin joogto ah iyo qoyaan
Ku waraabinta zamiokulkas uma baahna marar badan. Carrabku waa inaanu mar walba qoyin, iyo xataa si ka badan marka xilliga jiilaalka. Ku dar biyo dheriga marka ciidda dusha sare ay noqoto mid qalalan. Xilliga jiilaalka, waraabinta waxaa la sameeyaa marka substrate ee kareemku u eg yahay clod ah oo dhul engegan.
Tag mashiinka hawada. Geedka Doolarka wuxuu dareemayaa weyn yahay qoyaan hawada ugu yar. Si kastaba ha ahaatee, ha ilaawin inaad tirtirto caleemaha geedka ugu yaraan hal mar bishiiba maro qoyan si aan boodh iyo wasakh kuugu soo ururin iyaga.
Waa muhiim! Qoyaanka xad-dhaafka ah ee ubaxu waxay keenaysaa xaqiiqda ah in zamiokulkas huruud ah. Sidaa darteed, ha soo saarin waraabin xad dhaaf ah, haddii kale geedka wuxuu bilaabi doonaa xanuunka iyo u engegay!
Bacriminta iyo dharka sare ee ciidda
Haddii dhirtu joojiso koritaanka iyo horumarka, markaa waxaad u baahan tahay inaad ka fekerto sida aad u quudin karto geed gole.
Bacriminta dhirta inta lagu jiro xilliga sii kordhaya waa inay ahaataa hal mar toddobaadkii, bacriminta bacriminta leh bacriminta macdanta. Fikradda Bacriminta waa inay noqotaa 2 jeer, sidaas darteed dharka la dhammeeyey waxaa lagu qasi karaa biyaha 1: 1.
Bishiiba mar, geedka doolarka waa in lagu buufin karaa HOL ama Bacriminta adag. Xaaladdan oo kale, ku buufin jidhka geedka, oo ma aha lakabka sare ee carrada. Quudinta warshadda sida ku qoran tilmaamaha, waxaad badbaadineysaa midabka caleemaha, ka hortagga cudurka iyo dardar-galinta koritaanka Zamiokulkas.
Tilmaamaha Qalabaynta Zamiokulkasa
Marka lagu daro bacarimiso iyo waraabinta, Zamiokulkas waa in si joogta ah loogu wareejiyaa dher cusub sidaas darteed dhirtu waa cudur u adkaysata waxayna leedahay muuqaal caafimaad leh. Goormaad u baahan tahay inaad beerista geed gole si aad ugu dhaawacanto geedka?
Daaweynta Zamiokulkasa waxaa lagu sameeyaa Abriil ama Maajo. Isla mar ahaantaana, waxaa muhiim ah in beerista dhirta ay la socoto carrada laga bilaabo dherigii hore. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad isla markiiba ka tagto dheriyo ka yar guriga "jir" jir ah ama mid la mid ah.
Waa muhiim! Marka aad joogtid guriga, gawaarida geedka yar yar waxaa la sameeyaa 1 mar sanadkii.
Warshadda waxaa lagu duubay dherer weyn (3-4 cm ka weyn midda hore ee dhexroorka), halka dushooda digriiga ee xididada ma daboolin dhulka si nidaamka xididka uusan noqon mid aad u qoyan. 2 maalmood ka dib markii lagu tallaalay, warshadu waa in ay si badan u waraabisaa.
Waxaa ugu wanaagsan in la soo celiyo dhirta caag balaastig leh oo hoos u dhejisan. Si kastaba ha noqotee, waa inaysan aheyn mid aad u sarreeya, sidaa darteed inta lagu jiro tallaalka xiga waa inaadan kala qaybin.
Waa muhiim! Dareemaha dheriga caaggu wuxuu tilmaamayaa in geedka si degdeg ah u baahan yahay xubin kaabis.
Sida aad u aragto, waa wax sahlan in loo bedelo zamiokulkas oo guriga lagu beddesho.
Ku dhalashada guriga
Dad badan ayaa ka fekeray sidii ay ugu dhufan lahaayeen Zamiokulkas guriga. Qeybtaan, waxaan ka jawaabi doonaa su'aashaan iyo faahfaahin si faahfaahsan qaabka loo dhaqayo geed geedka.
Waa sahlan tahay in dukumiintiyada Zamiokulkas la faafiyo digriiga, sida tuberka laftiisa u qaybiyo inta lagu jiro koritaanka. Waa inaad kaliya qeybisaa qayb ka mid ah tuber inta lagu guda jiro qorshe lagu beeray warshad.
Waa muhiim! Waxaa suurtagal ah in lagu kala qaybiyo digriiga kaliya marka ugu yaraan hal dhibcood oo kor u kaca qaybta si loo kala tago. Haddii kale, waxaad si fudud u waxyeeleynaysaa nidaamka xididka geedka.
Goobta kala-guurka waa in lagu rusheeyaa jajabyo jilicsan oo firfircoon oo ka baxa si qallalan. Ka dib markaa, dhirta dhirta leh dherer leh asal nafaqo leh, ka hor intaan daboolin hoose ee dheriga leh dheecaan.
Nidaamkan kala qaybinta maahan midka ugu wanaagsan, sababtoo ah waxaa jira khatarta dhimashada warshad hooyada. Intaa waxaa dheer, tuber gooni u ah ma degi karto. Waxaa haboon in la xusuusto in dhirta dhalinyarada aan loo tarxiilin habkan sababta oo ah la'aanta tiro ku filan digriiga.
Sida aad u arki karto, waa mid aad u fudud in la xidido geed dollar oo leh digriiga, nooca noocaas ah ayaa la heli karaa xitaa kuwa ubaxlayaasha aan la aqoon.
Faafinta by guntooda leedahay faa'iidooyinka, sababtoo ah, marka hore, jarida ka kooban yahay nafaqooyin dheeraad ah oo fududeynaya aasaasida geedka cusub, iyo labaad ahaan, gooyn la faafin karo xitaa marka geedka uu leeyahay 2-3 oo laamood, oo loo isticmaali karo sida gooynta.
Sida caadiga ah, ka soo qaado a geed ka dollar ah waa fududahay. Si taas loo sameeyo, uma baahnid qalab gaar ah, waxaa muhiim ah in la raaco tilmaamaha.
Loogu talagalay taranka, dooro jirid xoog leh ee cabbirka xajmiga ah (haddii aad doorato aad u yar, ka dibna wuxuu qaadan doonaa waqti dheer si xididada). Nidaamka la soo xulay waxaa lagu kala soocaa mindi laga soo bilaabo geedkii hooyada oo la dhigo biyo (waxaan sidoo kale ku darnaa dhuxusha firfircoon ee jeermiska).
Waa muhiim! Wajiista ayaa doorta qayb ka mid ah asliga ah, taas oo ay jirto ugu yaraan 1 kelyood.
Biyaha ku jira taangiga ayaa si joogto ah loo badalay oo la kormeeray si uu u goynta aan lahayn. Sida ugu dhakhsaha badan xididada u muuqdaan - dhirta yaryar waxaa lagu beeray ciidda.
Waxaa jira kala duwanaansho kale oo loo yaqaan "grafting", taas oo geedka loo dhigo dhulka. Kadib jarida boogta, meesha kala go'ay waxaa lagu daaweeyaa dhuxul la jajabiyey oo ka tagay maalintii oo aan la dhigin biyo ama substrate. Tani waxaa la sameeyaa si loo gooyo waddooyinka la qabadsiiyo ee jeexan iyo qaababka lakabiga.
Maalin ka dib, jirida waxaa la dhigaa meel qoyan, iftiin leh, carrada nafaqo leh oo lagu daro peat iyo raad raaco xubno. Si aad u sahlanaato in lafdhaqaaqa si aad u degto, waxaad ku xiran kartaa koronto-kuleylka korkiisa (sababtoo ah waxaad qaadan kartaa weel quraarad caadi ah), oo mararka qaarkood aad u baahato in aad ka qaadid hawada.
Sida ugu dhakhsaha badan caleen ugu horeysay oo leh filim guduudan oo ka muuqda dhirta, jarida ayaa la qaadaa. Waraabinta warshad dhalinyaro ah ayaa lagama maarmaan u ah si biyuhu aysan u dhicin kelyaha (waxaa wanaagsan in biyaha lagu shubo wareegga wareegga dheriga).
Ma taqaanaa? Marka lagu daro spathiphyllum, zamiokulkas waxaa sidoo kale loo yaqaan "farxad gabab". Dad badan ayaa sheegaya in dhirta ubaxu ay ka shaqeyneyso cajaa'ib iyo milkiilaha uu ku faraxsan yahay jacaylka.
Nooca ugu fudud ee taranta, taas oo aan u baahnayn waqti badan iyo ilo kale. Inta lagu jiro dhalashada caleen, waa muhiim in la fahmo in caleen ay tahay laanta oo ka soo baxda dhulka. Goobta zamiokulkas waa dhulka oo waa tuber leh xididada. Sidaa darteed, loogu talagalay dhalmo isticmaalaya caleemo yaryar, kuwaas oo qayb ka ah caleen weyn.
Ka hor inta aadan dhajin geedkaaga, diyaariso mindi fiiqan iyo weel biyo ah. Si taxaddar leh u gooyso caleen ka baxda geedka deynka oo hoos ugu dhufo biyaha si ay 2/3 of caleen u biyo ku daadiyaan. Markaad jarayso buug-yarahaan waxaad u baahan tahay inaad qabato qayb yar oo ah asliga ah.
Laga bilaabo xilliga aad dhigto caleenka biyaha, ilaa iyo inta xididada u muuqdaan, waxay qaadan kartaa qiyaastii 3-6 bilood, markaa ha ku dembaabin caleen xun ama waxbarid khaldan.
Waa muhiim! Daawada jeermi-dilida 1-2 kiniin ah oo kaarboon firfircoon ayaa la dhigayaa biyaha.
Sidoo kale xaashida la gooyey waxaa lagu beeray peat. Xaaladdan, ka dib jarida xaashida, waa in la tagaa si ay u qalalaan hal maalin, oo kaliya markaa "dhegi" godka. Caleen ayaa u dhiganta 1/3 oo dherer ah iyo biyo leh biyo ku filan (ha ka qulqulin substrate, haddii kale caleen si fudud u jimicsi).
Marka xigta, suxuunta leh xaashid si aad u daboosho galaas / canbar / polietilen. Xaashida waqti ka waqti waxay u baahan tahay in la waraabiyo lana duubo. Waqtiga biqilka ee xididdada waa isku mid ah markii markii lagu duubay warqad biyo ah.
Waa muhiim! Markaad beerayso caleen subagga, ma awoodi doontid inaad aragto kalluunka caleenta, sidaas darteed waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho biyo si aad u xakamayso habka biqilka.
Dhibaatooyinka suurtagalka ah ee beerashada, cudurada iyo cayayaanka ee zamiokulkas
Geedka lacagta ayaa saameeya cayayaanka inta badan sababo daryeel caafimaad oo aan habooneyn. Kuwa ugu caansan "booqdayaasha" ee dhirta ayaa ah caarada caarada iyo caarada.
Aynu bilowno caarada caaradataas oo udubdhexaad u ah dhirta.
Xayawaan xoolo yar yar ah oo quudiya dheecaanka dhirta. Tikidhku waa mid aad u yar oo adagtahay in la arko. Naas-nuujintu waxay dhaawaceysaa waxyeelada geedka, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad si deg deg ah ula dagaallanto.
Si aad u burburiso cayayaanku, waxaad isticmaali kartaa xalka saabuunta (taas oo u baahan in la tiriyo jirka oo dhan geedka), ama isticmaal qalabka khaaska ah si loola dagaallamo duleelka - acaricides. Sidoo kale caarada caarada ayaa ka cabsaneysa khamriga. Ku qoyso suufka santuuqa 96% oo tirtir geedka oo dhan.
Waa muhiim! Kaliya dadka qaangaarka ah ayaa ka cabsada khamriga, ukunta saxarada ayaa sii noolaanaya.
Cayayaanka labaad ee geed gole - gaashaan.
Shchitovka ayaa iska leh qoyska cayayaanka hemiptera. Waxay u egyihiin dhirta badan, sidaa darteed Zamiokulkas maaha mid ka reeban. Wixii dagaal, waxaad isticmaali kartaa dhammaan saabuunta saabuunta saabuunta dharka lagu dhaqo, taas oo lagu dabaqo jirka oo dhan.
Ka dib markii la sameeyo saabuun, ku dabool bacda balaastigga ah. Daaweynta waxaa la sameeyaa dhowr jeer ilaa inta kaamilku ka baxo geedka. Kuma talineyno isticmaalka kiimikada si loola dagaalamo gaashaanka, maadaama ay yihiin sun badan, oo ku buufin aag degaan ah waa mamnuuc.
Waa muhiim! Qoyaan kordhay waa sababta ugu horreysa ee sumeysan ee zamiokulkas.
Marka lagu daro dulin, zamiokulkas waxay ku dhici kartaa cudurro. Sidaa daraadeed, waxaan kuu sheegi doonnaa sida loo aqoonsado "xanuunka" oo daaweyntana.
1. dhibco mugdi ah caleemaha. Waxaa jira dhowr sababood: qoyaan xad dhaaf ah, qaboojin ama heerkul hooseeya. Iska yaree cabirka biyaha iyo dhererka ubaxa dhererka meel kale. Muddo ka dib, zamiokulkas wuxuu ku noqon doonaa mid caadi ah.
2. Rootiga dabaysha. Warshadu waxay bilaabmaysaa in ay noqoto mid la yiraahdo haddii lagu daro si xad dhaaf ah heerkulka hooseeya. Isla mar ahaantaana waxaa jira dabeecad jilicsan. Marka laga reebo asliga ah, xididdada ayaa sidoo kale bilaabaan in leexo, sidaas xaaladdu waa in si dhaqso ah loo saxay si ay dhirta ma dhiman.
Si loo kaydiyo geed gole, waa la qodayaa oo jarayaa qaybaha cayayaanka. Maraqyada waxaa lagu daaweeyaa jajabyo jajab ah. Ka dib "dib-u-nooleynta", jidhka geedka waa in lagu daaweeyaa fungicide iyo lagu dhufto dheri kale oo leh ciid cusub.
Waa muhiim! Haddii geedi socodku aanu dib-u-dhicin, tuberka ayaa la tuurayaa, isaga oo ka tegaya dhammaan caleemaha caafimaad ee dhalmada. Sidaa darteed, waxaad soo celin kartaa geedka.
3. Geedka ayaa bilaabay inuu qalalo. Zamioculcas ayaa qallajiya oo caleemaha u rogaa laba sababood: Dhibaatooyinka da'da ama mashiinka. Sidaa darteed ha ka welwelin, kaliya si taxadar leh u nadiifi caleemaha iyo asliga ah, sidaa daraadeed dhirta aan dhaawacmin.
4. Jeexa caleemaha. Waxaan dib u soo celinay dhibaatadan kor ku xusan, markii aan ka hadalnay nidaamka waraabka. Caleemaha cagaarku waxay ka muuqdaan geedka marka ay jirto dheecaan qoyaan. Sidoo kale, haddii caleemo ka muuqato xididada, caleemaha ayaa bilaabi doona inay huruud noqdaan. Si aad u bogsato dhir, waxaad u baahan tahay kaliya inaad qallajiso ciidda ama, haddii ay ku jirto xaalad aan la dayacin, ku dar qalabka cusub ee qalalan.
5. Waxay ku jirtaa dabeecada. Haddii dhibcuhu aysan qoyin / jilicsanayn taabashada, markaa tani waa uun muuqaal geedka. Sidoo kale dhibco mugdi ah ayaa ka danbeeyay xagasha. Baro jilicsan oo caleemo leh ayaa caleemaha ka muuqda. Xaaladdan, kaliya beddel meesha, iyo dhirta lafteeda ayaa la soo celin doonaa.
Iyada oo cayayaanka ugu weyn iyo cudurada dhirta dollar, waxaan ka soo baxay, hadda waxaan bilaabi gooyaa zamiokulkasa.
Dhirta gooyaa ee la gooyey guga. Inta lagu jiro kobaca degdega ah, kelyaha sare, oo hela nafaqooyinka ugu badan, ayaa si tartiib ah looga saaraa. Caleemaha gooyay sidaas darteed dhamaadka taajka ayaa u ekaa qaabka kubada. Ka dib markii gooyo, geedka dakhladda si deg deg ah u sameeyaan burooyinkooda hoose, ka dibna soo jeeda caleemaha yar yar.
Waa muhiim! Adiga ma jari karno xilliga jiilaalka, sida geedka wakhtigaani uu geli karo isla markaana joojiyo si uu u koro.
Hadda waxaad ogtahay in haynta geedka daa'inka ah ee guriga uusan ahayn mid adag sida ay u muuqan karto. Ha iloobin daryeelka dhirta, mar walbana way ku farxi doontaa.
Koraaya strawberries noocyo "Elsanta": beerashada iyo daryeelka
Guryaha dawooyinka iyo ka hortaga dabka (salvia) qashinka
Optimara - rabitaankayga, Jacaylkayga iyo dadka kale: taariikhda muuqaalka, sharaxaadda iyo sawirada
Maxay tahay iyo sida loo daweeyo sinusitis ee turkiga
Sida loo koro cohosh madow goobta: beeritaanka iyo daryeelka
Tolstyanka wuxuu leeyahay magac magaciisu adag yahay oo adag, oo ku habboon dhegta Ruushka - Crassula, si kastaba ha ahaatee, magaca "geed geed" ayaa isaga u goostay inta ugu badan. Thanks to guushii kama dambaysta ee feng shui, qashinka waa la yaqaan oo lagu qiimeeyaa sida warshad hanti ah, oo aan caafimaad ahayn. In kastoo dhabta ah wax walba waa uun soo horjeeda: faa'iido dhaqaale ee dhirta, sida ay yiraahdaan, lama yaqaan cilmiga, ka duwan faa'iidada daawada. Read More
Sidee ayuu u egyahay, meesha iyo sida ay u koraan
Sidee loo sameeyaa tufaax caano leh: talaabo tallaabo tallaabo ah oo sawir leh